Ohatrinona ny vola azonao amin'ny Blog WordPress? - Learn Expert Blogging
Afaka manao na aiza na aiza ianao $100 ny an'arivony dolara mora foana amin'ny WordPress bilaogy. Tsy afaka ny hanamaivana ny alalan 'izany taranaka fidiram-bola, raha ny tena izy, dia tokony hanana ny tsara tetika, teknika fampiharana.
Tsy isalasalana fa misy fomba maro hahazoana vola amin'ny internet. Fantatrao maro ireo mpampiasa no niteraka fidiram-bola avy amin'ny YouTube, freelancing, sns. Fa mizara ny zavatra niainako manokana, tsy misy azy ireo dia afaka mifaninana nahazo vola amin'ny alalan'ny bilaogy WordPress.
Afaka matetika mahita 1000 ny bilaogera ao amin'ny aterineto, Vao maraina, zazavavikely tanteraka izy ireo saingy amin'izao andro izao, izy ireo karama manodidina $25,000+ isam-bolana tena mora. Tsy mitovy ny fanaovana bola raha matory.
4 dingana hahatonga anao mahomby tokoa amin'ny fanaovana vola avy amin'ny WordPress bilaogy?
Ny WordPress SEO Blog Articles
Lalao Changer Topic izay soratanao
Teny lakile mifaninana ambany
Doka vs marketing marketing
Famaranana -manao vola amin'ny Blog WordPress?
Misy 4 zavatra tokony hikarakara anao foana. Tsy miraharaha ireo zavatra ireo, tsy afaka mahazo fahombiazana eo am-piandohana amin'ny fanaovana vola amin'ny bilaogy WordPress ianao.
SEO dia Search Engine Optimization amin'ny ankapobeny. Midika izany fa tokony hanoratanao ny lahatsoratrao izay tena mifanaraka sy takatra amin'ny motera fikarohana toa an'i Google Bing sns. Izy io dia momba ny fandefasana atiny mitovy amin'ny efa nangatahina. Tokony hianatra aloha ianao avy eo ampiharo amin'ny fomba tsara. Izaho koa nanao toy izany koa.
Tena zava-dehibe ny fomba fanaovana SEO eo amin'ny pejy sy SEO ivelan'ny pejy. Ho an'ny SEO eo amin'ny pejy, Amin'izao fotoana izao dia be ny plugins WordPress maimaim-poana hanatsarana ny atiny hilahatra ao amin'ny google toy ny motera fikarohana toy ny Yoast, laharana matematika ireto roa ireto no mitarika ankehitriny.
Mba hametraka ny, Off pejy SEO tena zava-dehibe be izany dia faritana ho toy ny fahazoana ny fahefana amin'ny alalan'ny tranonkala mampifandray indray ny vohikala amin'ny alalan'ny manam-pahefana maro tranonkala. Fa miaina amin'ny 21 taonjato maro Google nandroso ampy amin'ny teknolojia azy manokana, ary mahalala izay misy ifandraisany na tsy misy ifandraisany. Manana tranokala vaovao ary manatsara ny sandany backlinks avy hatrany dia tena sarotra. Betsaka no mety milaza fa azo atao izany raha ny marina. Mampiasa teknikan'ny blackhat izy ireo hananganana ny lazany indray mandeha. Ny fanavaozana ny motera fikarohana dia matetika matetika ,tsy hanampy anao ireo teknika tsy mety ireo.
Na izaho aza dia nanomboka tranokala vaovao 3 volana indray. Tsy mbola nanao backlink aho. Nanoratra aho 25 lahatsoratra tsirairay avy 2500 teny. Avy amin'ny 25 lahatsoratra, 5 lahatsoratra dia ambony ao an-tampon'ny toerana iray. Tena tsara izany amin'ny dingana voalohany.
Maninona aho no tsy miankina amin'ny backlinks?
Satria i Google dia manana 200 miampy famantarana famantarana. Raha manome fampahalalana mifandraika amin'ny SEO eo amin'ny pejy ianao, ary azo antoka fa ambany dia ambany fifaninanana teny fanalahidy, Azo antoka fa ity dia manatsara anao. Ho hitovy amiko ianao. Ny laharana bilaogin'ny WordPress anao dia afaka manomboka mikarama ao anatiny mora foana ianao 3 ny 4 VOLANA.
Niche amin'ny ankapobeny dia lohahevitra iray izay hosoratanao. Na inona na inona mety ho fanabeazana, teknolojia sy gadget, lamaody amin'ny fiainana hacks, haingon-trano sns. Raha lasa manam-pahaizana momba ny SEO ianao, taorian'izay tokony hijery ny mahasoa lohahevitra izay afaka mahazo tsara ny fidiram-bola ho anao.
Tsy azonao jerena mihitsy io lafiny io. Nahita fizarana nahomby sy tsy nahomby maro aho noho ny akany. Izany no manan-danja koa rehefa manao SEO hanoratra lahatsoratra. Izaho manokana Manoro hevitra anareo mba hijery fepetra sasany eo amin'ny fitadiavana ny akany.
Voalohany, ny lohahevitrao dia tokony hanana habaka fikarohana tsara, ny mpampiasa dia mitady karazana teny lakile isan-karazany. Faharoa, tokony hanana fahalalana betsaka momba izany ianao. Farany, jereo ny sandan'ny teny lakile.
Ohatra -any ny dingana voalohany indrindra, Natomboko tamin'ny diako tononkalo teny an-toerana ny diako bilaogy. Izaho koa manana fanazavana be momba azy io. Ny olona koa nitady isan-karazany ny tononkalo. Fa ahoana ny sandany. Tsy manana vinavina ahazoam-bola tsara. Tadidiko aho nanoratra 50 lahatsoratra bebe kokoa, avy eo mahazo vola kely dia ambany. Anisan'ireo 50 lahatsoratra, 25 + lahatsoratra izao tontolo izao ambony ao an-tampon'ny 5 toerana. Ny vohikala nanana SEO tsara, fa tsy mahasoa. Raha tsy manome fidiram-bola ho ahy izany. Taty aoriana dia nandatsaka izany. Tamin'izany andro izany no saika, Azoko tsara akany zava-dehibe be dia be.
Izaho manokana Manoro hevitra anareo mba handeha ho amin'ny teknolojia akany. Tato ho ato, hiverina aminao ity dia goavana. Ny zavatra iray tokony hoeritreretinao dia ny vidiny isan-tsindry tiako ho CPC an'io teny lakile io. Tokony ho manodidina 5 ny $10 dolara. taty aoriana, afaka manao marketing Affiliate ianao ary manaraka izany mba hampisondrotra ny vola miditra.
Raha ny ambany fifaninanana teny fanalahidy, mahita ny kely indrindra amin'ny 25 ny 30 teny alohan'ny hanombohana manoratra bilaogy. Keywords fa tsy misy olona dia nanoratra lahatsoratra momba izany. Nahoana aho nilaza fa tsy misy olona dia nanoratra momba izany. Ny antony, satria ianao tamin'ny voalohany sehatra, rehefa mampitombo ny tranonkalanao ianao, dia manomboka lasibatra teny fanalahidy ny mpifaninana. Izao no fepetra fahatelo koa izay zava-dehibe toy ny akany fifidianana ary koa ny manao ilaina SEO.
Rehefa misy olona manomboka mahazo fifamoivoizana amin'ny tranokala. Ny iray dia lasa liana te-hanana vola amin'ny tranokala amin'ny alàlan'ny doka na marketing marketing. Ireo no roa malaza indrindra amin'ny alalan'ny fomba izay hiteraka fidiram-bola ny olona. Raha mifantoka amin'ny doka ianao. Izaho manokana fahazoan-dalana hidirana ny fahazoana fankatoavana avy amin'ny Google AdSense fa tsy tokony hampiasa Google dokam-barotra amin'ny namany Sary. Androany dia mahazo denaria vitsivitsy ny tranokala vaovao. Rehefa hahazo Mitana habetsaky ny fifamoivoizana eo amin'ny tranonkala fa tsy AdSense tokony handeha ho Ezoic na Mediavine. Ireo roa ireo sehatra malaza amin'izao fotoana izao. Io no hamerina ny sandan'ny asa mafy nataonao. Efa nahita fahombiazana tantara maro izay nahazo an'arivony dolara miaraka amin'ny dokam-barotra ihany no manompo.
Ankoatr'izay, ho an'ny tranonkala vaovao, Izaho manokana mahatsapa ny handaka manomboka ny diany ao anatin'ny Affiliate-barotra, fa tsy mifantoka amin'ny dokam-barotra ihany no. Izany dia hampihena ny asa mafy ataonao rehefa manomboka mahita vola miditra ianao, avy hatrany dia mahazo aingam-panahy ary miasa bebe kokoa mba hahazo bebe kokoa. Afaka mahita ny sasany eto ianao amin'ny serivisy fampiantranoana WordPress tsara indrindra eto…
Zavatra iray tiako hamafana eto, Ny fitorahana bilaogy miaraka amin'ny wordpress dia zavatra tsy isalasalana fa mitaky fotoana 7 volana 9 volana mba hahita vokatra ianao, fa indray mandeha nanomboka nahazo vola, hitombo hatrany io ary tsy hifarana izany. ankapobeny, dia tsy misy fiafarana dingana.
Azoko atao ve ny mividy anaran-tsehatra ary hampiasa izany Na aiza na aiza?
Previous PostAhoana no fomba hamoronana tranokala WordPress tsy misy fampiantranoana?
Next PostSarotra ve ny mahazo vola amin'ny Marketing Affiliate?